Lenovo koa dia miasa amin'ny telefaona fakantsary azo esorina | Androidsis
Ny OPPO Find X no lasa maodely voalohany miaraka amina fakantsary azo esorina eny an-tsena. Toa io no hanjary fironana vaovao amin'ny Android, satria mitombo hatrany ny isan'ny marika miasa amin'ny finday miaraka amin'ity endri-javatra ity. Lenovo no farany nanatevin-daharana azy. Ary efa tafaporitsaka ny horonan-tsary misy ny foto-kevitr'ilay telefaona vaovao an'ny marika sinoa.
Afaka mahita an'io isika ao Telefaona Lenovo izay hampiasa an'ity fakantsary azo esorina na slide-in ity. Amin'izany fomba izany, miaraka amin'ity rafitra ity, ny efijery fitaovana dia tsy hampiasa ilay notch.
Toy ny lojika, foto-kevitra izany, izay tsy mila midika hoe hanomboka ity modely ity ny marika. Na hoe hafa tanteraka ny vokatra farany. Saingy mamela antsika hanana hevitra mazava momba ny zavatra amboaran'ny marika sinoa amin'izao fotoana izao ho an'ny findainy vaovao.
Tsy misy isalasalana, mahaliana ny mahita an'i Lenovo mandefa telefaona an'ireto toetra ireto amin'ny tsena. Very tany amin'ny tsena ny mpanamboatra. Ka ny fandefasana maodelin'ity karazana ity dia mety hanampy azy ireo hahazo laza malaza eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nozarain'ny filoha lefitry ny orinasa ity horonantsary ity.
Tsy i Lenovo irery no miasa amin'ny maodely toy izany. Manana ny Xiaomi Mi MIX 3 ihany koa izahay, izay ho tonga amin'ny fararano sy ny Vivo NEX izay hiloka amin'ny rafitra mitovy amin'izany. Izy rehetra dia marika sinoa mitady hametraka ny tenany ho toy ny manavao indrindra eo amin'ny tsena.
Ho hitantsika amin'ny farany raha lasa fampiasa mahazatra eny an-tsena ity fakantsary azo esorina ity, na natokana ho an'ny marika vitsivitsy amin'izao fotoana izao. Tsy misy zavatra fantatra momba ny fandefasana an'ity modely Lenovo ity. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy manamafy an'ity hevitra ity amin'ny horonan-tsary isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Lenovo handefa telefaona fakantsary azo esorina
Samsung handefa maodely Galaxy J Prime roa amin'ity fararano ity